सडक २ अनलाइनमा हेर्न मिल्ने - Malayakhabar
होम पेज मनोरञ्जन सडक २ अनलाइनमा हेर्न मिल्ने
सडक २ अनलाइनमा हेर्न मिल्ने
मुम्बई । अहिलेको लकडाउन र कोरोना भाइरसको कारण विश्वका अधिकांश सिनेमाहल ठप्प छन् । निर्माण भएका चलचित्रहरू रिलिज हुन पाएका छैनन् । चलचित्र निर्माता डिजिटल मार्केटमा जान थाल्नु भएको छ भने कतिपयले उपयुक्त डिजिटल प्लेटफर्मको खोजिमा हुनुहुन्छ ।
यसैक्रममा बलिउडका चर्चित कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्र ‘सडक २’ पनि अनलाइनमा रिलिज हुने भएको छ । निर्देशक महेश भट्टले आफ्नो यो फिल्म डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ । विशेष फिल्मस र फक्स स्टार स्टुडियोले निर्माण गरेको यो चलचित्रमा सञ्जय दत्त, आलिया भट्ट, आदित्य रोय कपुर र पूजा भट्ट मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
यो चलचित्र १० जुलाईमा सिनेमा हलमा रिलिज हुने तयारीमा थियो । तर, कोभिड १९ का कारण सिनेमा हल बन्द भएपछि चलचित्रको प्रदर्शन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो । अब, ‘सडक २’ ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुनेछ ।
मुकेश भट्टले भनेका छन्, ‘कोरोना संक्रमितको संख्या घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गइरहेको छ । यो स्थितिमा के तपाईंहरूलाई लाग्छ कि सिनेमा हल खुल्नेछ ? यदी खुल्यो भने पनि के दर्शकहरू चलचित्र हेर्न सिनेमा हल पुग्नु हुन्छ ? मानिसलाई परिवारको चिन्ता छ । आज मानिसको जिन्दगी महŒवपूर्ण छ । म ‘सडक २’लाई ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज गर्न बाध्य भएको छु ।’
उहाँले थप्नु भएको छ, ‘मैले भविष्यमा कुनै आशा देखिरहेको छैन । तपाइँ कुनै काम बाध्यताले पनि गर्नुपर्छ । हामीसँग अरू कुनै विकल्प बचेको छैन ।’ ‘सडक २’ १९९१ मा आएको पूजा भट्ट र सञ्जय दत्त स्टारर ‘सडक’ को सिक्वेल हो । कोरोनाका कारण सिनेमा हल खुल्ने कुनै निश्चित नभएका कारण बलिउड फिल्ममेकर ओटीटी प्लेटफर्ममा फिल्म रिलिज गर्न बाध्य हुनु भएको छ ।
अघिल्लो लेख बिदेशीका लागि मलेसिया प्रबेश गर्दा गरिने Covid-19 परीक्षणको नयाँ शुल्क निर्धारित।
पछिल्लो लेख परिवार सवार जीप दुर्घटना, आमा र छोराको मृत्यु
८३ र सौर्यवंशीको रिलिज घोषणा
मिडियामाथि साम्राज्ञीको आक्रोश
नेपाल एयरलाइन्सका ३ जना पाइलट सहित १४ उडान कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
मलाया खबर न्युज डेस्क - July 6, 2020
काठमाडौं:= नेपाल वायुसेवा निगम ( नेपाल एयरलाइन्स ) का३ जना पाइलटसहित १४ जना उडान कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।